FIFIDIANANA TANY AMIN’NY FARITRA : LANY ANDRO NANENJIKA DAHALO IREO MPIFIDY TANY MORONDAVA SY MAINTIRANOLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYFIFIDIANANA TANY AMIN’NY FARITRA : LANY ANDRO NANENJIKA DAHALO IREO MPIFIDY TANY MORONDAVA SY MAINTIRANO
FIFIDIANANA TANY AMIN’NY FARITRA : LANY ANDRO NANENJIKA DAHALO IREO MPIFIDY TANY MORONDAVA SY MAINTIRANO
Distrika efatra no nisehoana trangana tsy fandriampahalemana sy fahamaizana trano, ka nampisavororo ny fanatanterahana ny fifidianana. Niato nandritra ny fotoana fohy vokatr’izany ny fandrotsaham-bato ary nisy ihany koa ireo tsy afaka naneho ny safidiny.
Ao anatin’ny andavanandrom-piainan’ireo mponina any amin’ireo distrika sasany ny tsy fandriampahalemana na mandritra ny fifidianana aza. Distrika telo no isany nitondra faisana noho ny asa ratsin’ireo dahalo nandritra iny andron’ny fandatsaham-bato omaly iny, ary fahamaizana kosa ny faninefany, araka ny fampitam-baovao avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena.
“Nandritra ny fotoam-pandatsaham-bato tao Mahasoa, fokontany iray any amin’ny kaominin’i Befasy, distrikan’i Morondava no nisy savorovoro noho ny halatr’omby, ny antoandro ”, araka ny tatitry ny mpitandro ny filaminana.
Enindahy mpangalatr’omby no fantatra fa nifanenjehan’ny zandary tany tao amin’io fokontany iray io. Nirongo basy vita gasy izy ireo ary saika nanohitra ireo mpitandro ny filaminana, ka antony nandraisana fepetra tamin’ny fampiantoana vonjimaika ny fandatsaham-bato.
“Nampisavoritaka tao amin’ny fokontany Marovoay banlieue, distrika Marovoay ihany koa ny fahamaizana trano teo akaikin’ny birao fandatsaham-bato iray, tamin’io antoandro io ihany”, hoy hatrany ny tatitra voaray.
Vokany, nisy fotoana tsy maintsy nampiatoana ny fanatanterahan’ireo mpifidy ny fandatsaham-bato tany amin’ireo toerana ireo. Am-polony minitra taorian’ny savorovoro anefa dia niverina tamin’ny laoniny ny fifidianana.
Ankoatra ny tany Morondava sy Marovoay dia nisy ihany koa ny takaitran’ny asan-dahalo izay nitranga talohan’iny andron’ny fandatsaham-bato iny. Tany Ambodimanga, fokontany iray any amin’ny distrikan’i Maevatanàna, ohatra, dia nitrangana halatr’omby ny talata alina. Niara-nirona nanao ny fanarahan-dia avokoa vokatr’izany ireo vatan-dehilahy tao amin’ny fokontany. Fantatra tamin’ny alalan-dRafidinirina Jean-Jacques, filoham-pokontany any an-toerana, fa zara raha nisy lehilahy ireo tonga nandatsa-bato.
Ny alatsinainy indray dia nahazoana tatitra teo anivon’ny mpitandro ny filaminana fa nofaohana andian-jiolahy ireo fitaovana nomanina ho an’ny fifidianana tao Andramalaza, distrikan’i Maintirano. Isan’izany ireo antotan-taratsy nalefan’ny Birao mahaleotena misahana ny fifidianana. Efa voasolo avokoa anefa ireo fitaovana tsy hita popoka ireo ka nizotra tamin’ny laoniny ihany ny fifidianana.
Partager la publication "FIFIDIANANA TANY AMIN’NY FARITRA : LANY ANDRO NANENJIKA DAHALO IREO MPIFIDY TANY MORONDAVA SY MAINTIRANO"